बलिउड Archives - Page 10 of 12 - Purbeli News
English बलिउड	बलिउडमा असफल भएकी काजल टोलीउडकी महँगी अभिनेत्री	बलिउडमा सफलता पाउन नसकेकी काजल अग्रवालको टोलीउडमा भने ठुलो डिमाण्ड रहेको छ ।बलिउडका केही फिल्ममात्र अभिनय गरेर आफ्नो लक टेस्ट गरेकी यी अभिनेत्री टोलीउडकी सबैभन्दा मँहगी नायिकामा गनिन्छिन् ।
टोलीउडमा पैसा तथा सफलता दुवै कमाएकी काजलले एउटा आइटम गीतको लागि हालसम्मकै ठुलो रकम लिएको बताइएको छ ।टोलीउडमा उनलाई आफ्नो फिल्ममा साइन गराउन निर्माताहरु महिनौ ...	रणवीरको प्रश्न – कट्रिनासँगको सम्बन्ध टुटिसक्यो भनेर मैले कहिले भने ?	काठमाडौँ / बलिउड अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री कट्रिना कैफबीचको सम्बन्धले ब्रेकपको रुप पाईसकेको खबर लामोसमय देखि चलेको हो । उसो त यो जोडि पछिल्लो समय एक अर्कालाई वेवास्ता गरिरहेको भिडियो र तस्वीर पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर रणवीर कपुरले आफूहरुको बीचको सम्बन्ध फेरि सस्पेन्स थपिदिएका छन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा रणवीर कपुरले पहिलो पटक कट्रिनासँगक...	शाहरुख खानको छोरा र अमिताभ बच्चनकी नातिनीको सेक्स भिडियो सार्वजनिक	एजेन्सी । शाहरुख खानको छोरा आर्यन खान र अमिताभ बच्चनको नातीनि नभ्या नभेलीको भिडियो क्लिपले अहिले बलिउडमा तहल्का मच्चाईरहेको छ । यी दुवै जना अहिले लन्डनको एक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार यीनिहरुको सम्वन्ध धेरै नजिकिएको थियो ।
यी दुवै जना एउटा पार्टीमा सँगै भेटिँदा खिचिएको तस्विर ट्विटर मा अपलोड भएपछि करोडौं पटक र...	यि हुन रियल लाइफमा बलात्कृत भएका अभिनेत्रीहरु	एजेन्सी । रियल लाइफमा अभिनेत्रीहरुसँग बलात्कार भएका धेरै घटानाहरु देखाइन्छन् । तर केही अभिनेत्रीहरु भने रियल लाइफमा नै बलात्कारको सिकार भएका छन् ।
केही यस्ता बलिउड अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जसले आफ्नो कालो बिगतको पर्दाफास गरेका छन् । बलिउडमा काम गर्ने सबै मानिसहरुको नियत सफा हुदैन भन्ने धेरैको भनाइ पनि यहाँ चरितार्थ हुन्छ ।
फिल्मका लागि काम दिलाइदिन...	बलिउड अभिनेता शाहरुख खान पक्राउ परेपछि भारतमा मच्चीयो हंगामा	काठमाडौं / बलिउड अभिनेता शाहरुख खानलाई अमेरिकाको लस एन्जल्स एरपोर्टका सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएर छाडेका छन्। आफू हिरासतमा रहेको जानकारी दिँदै शाहरुखले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, म सुरक्षा अवस्थालाइ बुझ्न सक्छु र सुरक्षा जाँचको सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। तर, म अमेरिका आउँदा प्रत्येक पटक अध्यागमनको अपमान सहनुपर्छ।
हिरासतमा रहेको बेला पोकेमोन गेम खेलेर ...	सोनाक्षी सिन्हा विवाह गर्ने तयारीमा !	के बलिउडकी दवंग नायिका विवाह बन्धनमा बाधिन लागेकै हुन त ? बलिउडमा यस्तै हल्ला चलिरहेको छ । बलिउडलाइफडटकमले दिएको रिर्पोटमा सोनाक्षी सिंहा आफ्नो कथित बोइफ्रेण्ड सचदेवसँग विवाह गर्न तयारी गरेको बताइएको छ ।
सोनाक्षी र बन्टी पछिल्ला केही वर्षदेखि सम्बन्धमा रहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरु छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाधिने तयारीमा छन् ।
रिर्पोटका अनुसार...	‘बाहुबली-२’ आगमी वर्ष आउने, नयाँ कन्सेप्ट यस्तो छ ….	‘कटप्पा’ले बाहुबलीलाई किन मार्यो? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजीरहेका दर्शकहरुको लागि ‘बाहुबली’को दोस्रो संस्करण आउने भएको छ। पहिलो फिल्ममै दर्शकको मन जितेर चर्चामा आएको बाहुबलीलाई फेरि फिल्मका निर्माताहरु फिल्मलाई भव्य रुपमा बनाउने तयारीमा लागिपरेका छन्। निर्माताहरुले बाहुबलीको अन्डरप्रोडक्सन भइरहेको जानकारी दिएका छन् भने दर्शकको आशातित अपेक्षालाई प...	पति, वा ब्वायफ्रेन्डद्वारा पिटिएका बलिउडका चर्चित ५ नायिका	बलिउडमा घरेलु हिंसाका घटना धेरै सुनिने गर्छन्। हालै मात्र टिभी शो नच बलिएको विजेता बनेकी दलजीत कौरले पतिसंग अलग्गिएपछि घरेलु हिसा गरेको भनी पति विरुद्ध केस गरेकी छिन्।
ऐश्वर्या राय बच्चनले...	रनवीर र ऐश्वर्याका कारण बच्चन परिवारमा खैलाबैला	बच्चन परिवार बुहारी ऐश्वर्या राय बच्चनसँग रिसाएको खबर बाहिर आएको छ । करण जोहरले बनाउँदै गरेको फिल्म ‘ऐ दिल हे मुस्किलमा’ रनवीरसँग उत्तेजक दृश्य दिएका कारण बच्चन परिवार रिसाएको बताइएको छ ।
ऐश्वर्याले किसिङ सिन दिन नमानेपछि फिल्ममा रहेका किसिङ सिन हटाइएको बताइएको छ । तर स्क्रिप्टमा रनवीरसँग एउटा उत्तेजक दृश्य दिनुपर्ने माग भएपछि उनले उक्त दृश्य गरेक...	बेइज्जत हुने डरले यी अभिनेत्री गइनन् कार्यक्रममा	बलिउडमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी अभिनेत्री ज्याकिलन फर्नानडेजले फिल्म ‘ढिसुम’ को प्रोमोशन गर्न एक कमेडी सोमा जान अस्वीकार गरेकी छिन् । टिभी सो ‘कमेडी नाइट्स बचाओ’ जान उनी नमानेकी हुन् । एकपटक अनुभव सम्हाली सकेकी ज्याकलिनले पछिल्लो अनुभव अझै भुल्न नसकेका कारण पनि उक्त सोमा जान नचाहेको बताएकी छिन् ।
उक्त सोमा जो सेलिब्रिटी आएपनि कृष्ण अभिषेक त...	«‹८९›»